TAKOORKA ASAL QARAMEEDKA EE GURIYEYNTA WAA SHARCI DARRO (Fair Housing Podcast - National Origin - Somali) | Pine Tree Legal Assistance
Shuruucda Guriyeynta Cadaaladda ee Federaalka iyo Gobolka ayaa mamnuucaya takoorida dadka ka yimid dalalka, aan ka aheyn Mareykanka, xiliga iibsashada, kireynta, maalgashiga, ama macaamilooyinka kale ee la xiriira guriyeynta. Eexda laga fahmi karo, ama si aragti la’aan u hibeynta tayooyin gaar ah xubno bulsho qaarkood, waxaa ka imaan kara aragtiyaha qowmiyadeed, luqad, caadooyin, iyo labbis waxayna horseedi karaan diidmo guriyeyn ama dhaqan takoor. Takoorka asalqarameedka ku saleysan ee si fudud loo argi karo waxaa ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Diidmada codsiyada guriyeynta ama helitaanka guri, ama ka guri saarida sababo la xiriira asal qaran;
U weecinta ama ku xadaynta dadka hal deegan dhismo, guriyo badan ama xaafado;
Diidmada ka kireynta dadka leh aqoonsiyada aan US aheyn ama ugu baahnaanshada foomam aqoonsi oo dheeri ah sida green cards, baasaboor ama kaararka amaanka bulshada, iyada oo isla marka looga baahneyn dadka kale;
Dib u-dhigida ama aan tayactir guri u samaynaynin dadka leh asal qaran, laakin shaqada u qabanaya dadka kale;
U adeegsiga shuruucda guriyeynta dadka leh asal qaran si ka badalan sida looga adeegsada dadka kakle;
Xayeysiinta inaan loo baahneen dadka asalkooda yahay wadan kale ama la soo dhaweeynaynin;
Diidmada la hadalka turjumaanada;
Ku hanjabaada wicitaanka adeegyada Socdaalka ama hanjabaad tarxiil iyadoo jawaab celin looga dhigaayo cabasho khuseeysa dayactir loo baahanyahay ama hagaajin;
Joojinta mariinka adeegyada sida barkadaha dabaalka ama xarumaha dharka lagu maydho;
Kiro aad u badan ama carbuun aad u sareeya;
U baahnaanshada saxiixe kale sabtoo ah kireystaha suurtagalka ayaa muhajir ama qaxooti, laakin aan uugu baahnaaneyin saxiixe kale dadka kale;
Guri ka bxinta si gaar ah ugu saleysan muhaajirinta ama xaalada qaxootinimo;
Aan baaritaan ku samaynaynin oo xal u raadinaynin hanjabaadaha iyo dhibaateynta kireystayaasha kale iyo shaqaalaha, sida cayda faraca ama qoomiyada, qoraalada xun, iyo joojinta mariinada guriga iyo adeegyada.
Shacrgia Guriyeynta Cadaalada wuxuu dablooya gurhaya badankood. Marxaladaha qaar, Sharcigu wuxuu saamaxaya dhismooyinka milkiilaha deganyahay ee aan laheyn wax ka badan afar qol, guri qoys kaliya ah oo la iibiyey ama la kireeyey iyadoon la isticmaalin dalaal iyo guriyaha ay maamulaan urruro iyo kooxo shaqsi loo leeyahay kuwaa oo xadidaayo deganaanshaha xubnaha. Sharciga Xuquuqda Aadanaha ee Maine ayaa sidoo kale leh saamaxaadyo iyo saamaxaadyo dheeri u ah milkiilayaasha degan guriyaha mataanooyinka ah ee ay leeyihiin. Labada sharci ayaa mamnuucaya xayeysiinta takoorka xitaa marka guriga leeyahay saamaxaad.
Fadlan la xiriir Pine Tree Legal Assistance haddii aad qabto su’aalo khuseeya takoorka ku saleysan asal-qarameed, xitaa haddii aad maleynayso guri inuu guri bixiyahay leeyahay saamaxaada shuruucda Guriyeynta Cadaalada.
Barnaamijkaan waxaa maalgeliyey waaxda Guriyaha iyo Horumarka Magaaloyinka ee Deeqda Guriyeynta Cadaalada. Tusmooyinka dhambaalkan ma ahan inay muujinayaan aragtiyada ama qaanuunada Guriyaha iyo Horumarka Magaaloyinka.